Izindaba - Ungawakhiqiza kanjani amaSintered Neodymium Magnets?
Sintered NdFeB uzibuthekuyinto uzibuthe wengxubevange owenziwe ngeNd, Fe, B nezinye izinto zensimbi.Kunamandla kazibuthe anamandla amakhulu, amandla amahle okuphoqelela. Isetshenziswa kabanzi kuma-mini-motors, ama-generator omoya, amamitha, izinzwa, izipikha, uhlelo lokumisa kazibuthe, umshini wokudlulisa kazibuthe nezinye izinhlelo zokusebenza zezimboni. Kulula kakhulu ukugqwala ezindaweni ezinomswakama, ngakho-ke kuyadingeka ukwenza ukwelashwa kwendawo ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Asikwazi ukunikela ezinengilazi, njenge-Zinc, i-Nickel, i-Nickel-ithusi-nickel, Isiliva, igolide-Plating, i-Epoxy enamathela, njll Ibanga: N35-N52, N35M-48M, N33H-N44H, N30SH-N42SH, N28UH-N38UH, I-N28EH-N35EH
Ukuqhutshwa Kokwenziwa Kwe-Sintered Neodymium Magnet
Izinto zokusetshenziswa kazibuthe nezinye izinsimbi zivezwa imvamisa yaphakathi nendawo futhi zincibilike esithandweni sokungeniswa.
Ngemuva kokuphothulwa kwezinyathelo zenqubo ezahlukahlukene, ama-ingots afakwa ezinhlayiyeni ezingamamitha amancane ngosayizi. Ukuze kuvinjelwe i-oxidation, izinhlayiya ezincane zivikelwe yi-nitrogen.
Izinhlayiya zikazibuthe zibekwa ku-jig futhi insimu kazibuthe iyasetshenziswa ngenkathi odonsa becindezelwa bobunjwa ngokuyinhloko. Ngemuva kokubumba kokuqala, ukucindezela u-oyela kwe-isostatic kuzoqhubeka nokwakha ubujamo.
Izinhlayiya zikazibuthe zifakwa kuma-ingots acindezelwe futhi azophathwa ukushisa esithandweni somlilo. Ubuningi bama-ingots wangaphambilini bufinyelela kuphela ku-50% wobuningi beqiniso bube sintering. Kepha ngemuva kokuthwebula, ukuminyana kweqiniso kungu-100%. Ngale nqubo, ukulinganiswa kwama-ingots kucishe kwehle ngama-70% -80% futhi ivolumu yalo yehliswe ngama-50%.
Izakhiwo eziyisisekelo zikazibuthe zibekiwe ngemuva kokuphothulwa kwezinqubo zokumisa nokuguga. Izilinganiso eziyinhloko kufaka phakathi insali yokuxinana kwensalela, ukuphoqa, nomkhiqizo wamandla omkhulu kuyarekhodwa.
Yibo kuphela ozibuthe abadlulise ukuhlolwa abathunyelwa kuzinqubo ezalandela, njengokufaka imishini nokuhlangana.
Ngenxa yokuncipha kwenqubo yokumisa, izilinganiso ezidingekayo zitholakala ngokugaya odonsa ngama-abrasives. Ama-diamond abrasives asetshenziselwa le nqubo ngoba uzibuthe unzima kakhulu.
Ukuhambisana kahle nendawo ezosetshenziswa kuyo, odonsa bafakwa kokuhlukahlukene ukwelashwa komhlaba. Ozibuthe baka-Nd-Fe-B ngokuvamile bathinteka ekugqolweni ngokubukeka okuphathwa njengezibuthe ze-NiCuNi, iZn, Epoxy, Sn, Black Nickel.
Ngemuva kokufakwa, ukukalwa okuhlobene nokuhlolwa okubukwayo kuzokwenziwa ukuqinisekisa ukubonakala komkhiqizo kazibuthe wethu. Ngaphandle kwalokho, ukuqinisekisa ngokunemba okuphezulu, sidinga futhi ukuhlola osayizi ukulawula ukubekezelelana.
Lapho ukubukeka nosayizi ukubekezelelana kukazibuthe ofanelekile, sekuyisikhathi sokwenza uzibuthe uzibuthe.
Ngemuva kokuhlolwa nokwenza uzibuthe, odonsa bakulungele ukupakisha ngebhokisi lephepha, ngisho ne-pallet yokhuni ngokwezidingo zamakhasimende. I-Magnetic Flux ingahlukaniswa ngensimbi yomoya noma isikhathi sokuletha esizwakalayo.